အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) က တင်သွင်းကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) က တင်သွင်းကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်…
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) က တင်သွင်းကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က အတည်ပြုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့(NUG) အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့တွင် Online Vidoe Conferencing စနစ်ဖြင့် ကတိသစ္စာပြု ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Like – 17K Share – 1057
2021-04-16 at 6:57 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ NUG အား ကြိုဆိုထောက်ခံပါသည်။
ဦးဝင်းမြင့် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးအား ခြွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံပါသည်။
2020..ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒ ရှင် ပြည်သူ
Myat Min Htet says:
2021-04-16 at 6:59 PM
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရအဖြဲ႕ NUG အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။
အပြည့်အဝ လေးစား ပါသည်။ထောက်ခံပါသည်။
2021-04-16 at 7:58 PM
ဓမၼကို တန္ဖိုးထားသူမ်ားရဲ ့အစိုးရ 🙏🙏🙏
Thida Su Mon says:
2021-04-16 at 8:05 PM
ၾကယ္စင္ ဟိန္း says:
2021-04-16 at 8:20 PM
ML Win Htut says:
CRPH # CDM # PEOPLE
နဲ့တင် တိုင်ပတ်နေသော မအလ
NUG# CRPH # CDM # PEOPLE
ဆိုရင်တော့ လစ်တော့ သာဝ
Cho Naing says:
2021-04-16 at 8:37 PM
NUG ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြိုဆိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံး အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး အစိုးရ(NUG) အား ဂုဏ္ယူ စြာျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါသည္ခင္ဗ်ား 💪💪💪
2021-04-16 at 8:55 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ(NUG) အား ဂုဏ်ယူ စွာဖြင့် ထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်ခင်ဗျား 💪💪💪
Than Dar Soe says:
2021-04-16 at 9:21 PM
Aye Aye Khine says:
2021-04-16 at 9:47 PM
Daw Aye Aye Mar says:
2021-04-16 at 10:14 PM
We Love NUG
Thanksalot and Congratulations to you all.
2021-04-16 at 11:02 PM
၁၆ ရက်၊ဧပြီ၊ ၂၀၂၁ တွင်ဖွဲ့စည်းသော
2021-04-17 at 12:39 AM
Abraham Thawng Kung says:
2021-04-17 at 2:02 AM
Congratulation to all! Freedom, equality and human dignity will begin to flow now, in the whole United States of Myanmar/Burma!
Saw Bu Lay says:
2021-04-17 at 10:06 AM
2021-04-17 at 11:11 AM
2021-04-17 at 12:37 PM
Strongly & Proudly,
Big & Great Support
To NUG ( National Unity Government of Myanmar.
Bravo… congratulations…. to all…
May Almighty God blessings to you all & your family
Abundantly for ever
& ever… Amen.
Phyu Phyu Latt says:
2021-04-17 at 1:37 PM
2021-04-17 at 1:38 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအား ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ထောက်ခံပါသည် ခင်ဗျား
2021-04-17 at 10:08 PM
We stand NUG.💛💛💛💛
We Support NUG❤️❤️❤️
2021-04-29 at 3:42 AM